I-Marseille T2 Chave / Camas
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Leonard
Ifulethi litholakala esifundeni saseCamas (Chave / Eugène Pierre) lapho impilo imnandi. Izitolo eziningi zendawo ezisezingeni eliphezulu zitholakala phansi kwesakhiwo (ibhikawozi, isitolo sokudla, ibhusha, ugwayi, ikhemisi, izindawo zokudlela, i-super U njll ...).
5 min ngezinyawo: la Plaine, cours Julien, la Timone, 5 avenues, Longchamp.
Imizuzu eyi-10 ngezinyawo: Isiteshi sesitimela saseSaint-Charles, isikhungo sedolobha, i-Old Port.
Ukufinyelela kalula ngethilamu: Ulayini T1, u-Eugène Pierre yima phansi kwesakhiwo.
Isakhiwo esijwayelekile saseMarseille esakhiwe ngamafulethi azimele ayi-5 esitezi ngasinye. Izindlu zalungiswa ngokuphelele ngo-2016: uphahla oluphezulu, ama-parquet phansi, amathayela usimende, itshe leCassis. Umhlobiso ofudumele, olula futhi ocwengekile. Dlula ukukhanya kulo lonke ifulethi. Ilanga ekamelweni ekuseni bese lisendlini yokuphumula kusukela ngo-1 emini.
Izitolo zasendaweni ezisezingeni eliphakathi nendawo engama-200m ukuzungeza indlu. Umakhelwane wabaphathi abasha abanamandla ngaphansi kwe-Plaine kanye ne-Cours Julien. Izibhedlela zase-Timone ne-Conception eziseduze. Isikhungo sedolobha kanye nechweba elidala imizuzu eyi-15 ngezinyawo, i-10 ngebhayisikili kanye ne-5 ngezithuthi zomphakathi. Izindawo ezimbalwa ezinhle eziseduze ongadla kuzo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R5457.